हङकङमा कतै तपाईको सानो लापरबाहिले गर्दा ५,०००$ जरिमानामा त पर्नु भएको छैन ? - Gulmeli Online TV
२४ फाल्गुन २०७८, मंगलवार ०६:०१
नारायण भण्डारी हङकङ ८ मार्च २०२२
हङकङमा कोरोनाको पाचौ लहरले आक्रान्त पारिरहेको छ हङकङ सरकारले सुरक्षा मापदण्डका अधिक्तम उपायहरु आबलम्वन गरेरै भएपनी सुन्य संक्रमणमा पुर्याउन हङकङ सरकार लागिपरेको छ। तर हामी नागरिकहरुले सरकारको सुन्य कोभिड संक्रमणको लागि कत्तिको जिम्मेवार बनेका छौ त?
आजभोलि हङकङमा कोरोना संक्रमण सुन्यदरमा ल्याउनको लागि हङकङ सरकारले कोरोना बिरोधी गतिविधीहरुलाई निकै कडाईका साथ लागु गरिरहेको छ। उनिहरुले आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक दुरी कायम राख्न र फेस मास्क अनिवार्य लगाउन अनुरोध गरिरहेको छ। आजकाल बर्दिधारी र उनिहरुको सरकारी गाडिमा मात्र नभएर हङकङ पुलिस सिविल ड्रेस र पाईभेट गाडिमा पनी तपाईहरुलाई चेक गरिरहेको हुन्छ ।
हिजो मेरो एकजना निकटतम मित्रको मलाई कलगरेर सोध्नुभयो आजकाल प्रहरी सिविलमा पनी खटाईएको छ र ? हो मोरो जोवाफ पनि सिधै थियो मास्क र सामाजिक दुरी लगायतका बिषयमा निकै कडा गर्दै आईरहेको छ। यदि तपाई कतै पनी पार्क जंगल वा बाटो घाटोमा हिड्दा कहिल्यै पनी चुरोट तान्ने निहुमा वा जुस पिउने निहुमा मास्क नकिकालौ सिधै यसरी ५,०००$ को चिट काटेर पैसा तिर्नबाट बच्नुहोस ।